Chrissy Teigen Qaawan & Topless ULTIMATE Collection - Chrissy Teigen
Bal eeg tusaalaha qaawan ee Chrissy Teigen iyo sawirada cirka isku shareeray, boogaha ku duuban fiidiyowyada cajiska naaska iyo waliba cagaheeda qurxoon waxaan jeclaan laheyn inaan dhuuqno! Haweenaydan ayaa ah astaanta moodada, afada heesta John Legend iyo hooyo laba carruur ah leh. Hoos waxaan ku diyaarinay sawirro badan oo qaawan oo Chrissy ah oo ay ku soo bandhigtay boob, ibta, dameer, iyo siil!
Chrissy Teigen waa 34 sano jir u dhalatay Mareykanka isla markaana ah xiddig baraha bulshada ku xiriirta. Waxay sameysay kulankeedii ugu horeeyay ee Model-ka sanadkiiba mar Issue Sports Illustrated Swimsuit Issue in 2010 ka dibna markii dambe waxay ka soo muuqatay daboolka sanadguuradii 50aad iyadoo ay weheliso Nina Agdal iyo Lily Aldridge oo caan ah sanadkii 2014. Teigen sidoo kale waxay isla abaabuleen Lip Sync Battle LL Cool J on 'Paramount Network'. Way guursatay John Legend sanadkii 2013.
Chrissy Teigen sawiro qaawan
Dhamaan qaawanaanada Chrissy Teigen waligood hal meel ayey ku sameeyeen! Chrissy waxay na siisay sawirro aad u tiro badan oo qaawan oo aan culeys lahayn, oo kaliya u macaan sida nacnaca oo aan si buuxda loo kormeerin sida wax walba oo halkan ku yaal Mostra Musa. Hoos waxaad ku arki doontaa Chrissy Teigen oo muujineysa wax kasta dameerkeeda, boogaha iyo dabcan iyada quruxsan quruxdeeda! Qaawanaanta iyada ayaa ah waxa ugu fiican ee maalin la bilaabo, ee ku raaxayso iyaga!
Chrissy Teigen sawiro aan xad lahayn
Hooyo kulul Chrissy Teigen oo toogasho sawir la'aan ah ayaa soo jiidatay dareenka wiilal badan oo paparazzi ah oo si cad u sameeyay sawirro wanaagsan iyada! Boobyada Chrissy waxay ahaayeen kuwo qoyan ibta naasahana way adkeyd inta ay isku soo taagaysay badda xeebta Miami. Xaaska Legend ayaa muujisay sida ay u kulushahay waanan adag ahay tan iyo markii aan arkay gallerykan!
Chrissy Teigen mar kale geesinimo maleh! Oo mar labaad uur leh!
Busty Chrissy Teigen waxay xirtaa isugeyn buluug iyo madow ah. Waxaa lagu arkay magaalada Los Angels, iyadoo u socota hubinta dhismaha gurigeeda cusub ee Hollywood Hollywood, iyadoo ay la socoto hooyadeed. Chrissy waxay muujisay ibta naaska iyadoo u muuqata bilaa geesinnimo
Mid kamid ah MILF-yada aan ugu jeclahay, Chrissy Teigen ayaa lagu arkay wadada! Waxay ku dhex socotey shakhsiyadeedii caadiga ahaa ee dharka madow, halka ay ku sii socdeen hawlo dhowr ah ka hor usbuuca dhammaadka Los Angeles. John Legend iyo Chrissy Teigen ayaa bambo ku tuuray fiidiyowgiisa cusub ee muusigga ee loogu talagalay heesta 'Duurjoogta' oo ay ka sugayaan lambarka ilmaha saddexaad! Waan ku faraxsanahay iyaga, dhammaanteen waan arki karnaa inay yihiin hal qoys oo faraxsan!
Chrissy Teigen sexy ee SI
Mid ka mid ah moodooyinka ugu xaragada badan nolosha, Chrissy Teigen sawirada galmada leh halkan ayey joogaan! Waxay na siisay agab ku filan mar hore, laakiin ma iska indho tiri karno sawirkan sawir qaadista ah ee ay sanadkii hore ka sameysay Isboortiga Sawirka Isboortiga 2017.Chrissy Teigen waxaa sawirka ka qaaday James Macari oo kusugan Jasiirada Sumba, ee wadanka Indonesia. Dharka dabbaasha waxaa sameeyay Ola Vida.
Mid ka mid ah sawirada toogashada ugu fiican abid ee loogu talagalay Sports Illustrated waa Teigen's dabcan, laakiin waxaan u baahanahay inaan ku tusno laba kale. Halkan waxaan ku soo bandhigaynaa Sawirada ugu badan ee Kate Upton ee SI iyo Chrissy saaxiibkeed Nina Agdal oo qaawan oo sawiro cirka isku shareeray isla majaladda !
Chrissy Teigen marada dusha sare
Wow, MILFkan maahan kaftan! Chrissy Teigen flash pusss on the AMA waa abaalmarinta dhabta ah ee nala siiyo!
Chrissy waxay xirtay dhar madow oo muujinaya wax ka badan intii la rabay, runtiina wax yar baa laga qaaday… Marka, nooca ebony wuxuu lahaa jeex qoto dheer oo kor u kacay ilaa iyo ilaa xubinta taranka ee qaawan ee dhinac kasta ka dhaca markii ay tageyna halkan si dhow loogu arko paparazzi si ay u qaadaan tallaalada ugu fiican! Oh wiil, sidee tani u samaysay maalintayda… Eegashada Chrissy Teigen sawirada qaawan ee qaawan, iyadu wax badan kama taxadarin! Teigen wey wada faraxsaneyd weyna dhoolla caddeysay halka xubinta taranka ay ku faraxsantahay sidoo kale LOLz! Adiguna, akhristayaashayda aan jeclahay, ku raaxee yaabkan dabiiciga ah!
Chrissy Teigen cagaha ururinta
Haddii aad moodeysay inaan cagaha iyo suulasha ka boodnay cagaha iyo suulasha qaaliga ah ee Chrissy Teigen, waad khaldantay! Naxyadeeda iyada ka sokow, dadku waxay raadinayaan cagtaan macaan badan… In ka badan Teigen's xubinta taranka ama boogaha, la yaab leh… Waa hagaag, si kastaba ha ahaatee, waxaan halkaan u joognaa inaan kaa dhigno mid adag, sidaa darteed ku raaxee daawashada lugaha Chrissy, suulasha iyo cagaha cagaha sare, iyo qaawan
Chrissy Teigen nip warqada
Fiiri warqadda sikada ah ee Chrissy Teigen inta ay ka hadleyso muuqaalkeeda tooska ah ee SnapChat, iyo dabcan, taageerayaasha dhabta ah ee Teigen ayaa arkay cilladan oo soo dejisay! Chrissy dhowr jeer ayay is rogrogtay sanadihii la soo dhaafay, tan ugu fiicnayd waxay ahayd warqad siil qaawan oo rooga casaanka ah sida aad kor ka aragtay! Chrissy Teigen waxay tusinaysay taankeeda cusub ee buufinta dahabka ah taageerayaasheeda, waxay xidhatay daboolka qubeyska gadaal. Laakiin, iyadatan ma ahayn waxa ugu weyn ee ay muujisay! Teigen ayaa si kama ’ah u iftiimisay ibta midig, adduunkuna wuxuu arkay badhanka adag ee waalan ee ay qarinayso!
Dhowr daqiiqo ka dib, si ay u sii raacdo dembigeeda xitaa intaa ka sii badan, Chrissy Teigen waxay sii deysay fiidiyoow ay ku weydiisaneeyso cafis, 'Waxaan rabaa oo kaliya inaan raaligaliyo qof walba oo aan ogahay. Waxaan hoos u dhigay asxaabteyda, waxaan reebay qoyskeyga, waxaan qabaa ibta naasaha. Ma ahan wax aan ku faano ',Ayay tiri iyadoo xiran xaragada xariirta.Mareykanka Trump, tani waa xaalad halis ah weligeed. Maxay tahay inay sameyso, in laga saaro ibtaheeda adag ee macaan?
si deg deg ah loo sii daayo pic.twitter.com/c6226cR6eJ
- chDayaanna ch Oktoobar 26, 2017
Kadib Teigen ayaa markale tweeted saacado yar kadib, isagoo leh:
Maxay la mid tahay kaaliye noqoshada Hollywood, adigu waad weydiinaysaa? pic.twitter.com/Eo4qolTLxK
Chrissy Teigen bikini sawiro
Waxay leedahay nin iyada jecel, laba carruur ah oo kaamil ah, jidh kaamil ah, digaag waaweyn, iyo weji qurux badan! Maxaa kale oo haweeney ay weydiisan kartaa? Maanta waxaan diyaarinay sawirro badan oo Chrissy Teigen bikini ah oo ka socda Portofino, oo ah meel Talyaani ah oo caan ku ah dadka caanka ah. Haddii aadan joogin Portofino, xitaa ma waxaad tahay dabaaldeg? Inta badan dhillooyinka iyo moodooyinka Hollywood-ka ah ayaa u adeegsanaya safarkan mid aan culeys lahayn oo adduunka u soo bandhigaya waxa ay soo bandhigayaan. Nasiib darrose, Chrissy ma ahayn mid kacsan markan, laakiin waxay muujisay muuqaalkeeda wanaagsan iyo boobaheeda iyadoo si qoto dheer loo kala jeexjeexay dharka dharka dabaasha ah.
John Legend iyo xaaskiisa Chrissy Teigen waxay maalin firfircoon ku leeyihiin biyaha Saint-Barthelemy. Waxaa lagu arkaa iyaga oo wada saaran barafka jet-ka isla markaana Christine Teigen ayaa iyaduna muujineysa jidhkeeda bikini ee cajiibka ah sidoo kale!
Hot Chrissy Teigen ayaa la arkay iyada oo tusaysa naasaha iyo ibta adag iyada iyo qoyskeeda magaalada Venice, Ogosto 2017. Hesho casharo qosol badan wiilasha!
Lady Gaga qaawan galmo
keesha sawiro xiise leh
sawiro qaawan ee danielle colby
Lisa Marie Johnson qaawan